Tariikhda Boqorkii kabanka Soomaalida Abwaan Xudeydi oo ku geeriyooday London | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Tariikhda Boqorkii kabanka Soomaalida Abwaan Xudeydi oo ku geeriyooday London
Tariikhda Boqorkii kabanka Soomaalida Abwaan Xudeydi oo ku geeriyooday London
Axmed Ismaaciil Xuseen (Xudaydi) oo loo yaqaannay Boqorkii Cuudka, 1928-2020
Alle ha u naxariistee, waxaa Magaalada London ku geeriyooday, fannaan, laxamiiste, Axmed Ismaaciil Xuseen (Xudaydi) oo loo yaqaannay Boqorkii Cuudka, maadaama uu ku xeeldheera tumiddiisa.
Xudeydi ayaa muddooyiinkii u dambeeyay la xanuunsanaa fayraska corona oo fara ba’an ku haya guud ahaa caalamka.
Axmed Ismaaciil Xuseen ‘Xudaydi ayaa fanka soo bilaabay isaga oo ay da’diisu tahay 18 sano,balse uu aad u soo shaac baxay markii ay da’diisu ahayd 20 jir.
Xudaydi ayaa Yeman ka oso laabtay sanadii 1960 halkasi oo uu fanka ka sii waday.
Alle ha u naxariistee Axmed Ismaaciil Xuseen (Xudaydi) waxaa uu sheegay in tumidda Kaban uu ku dhiirigaliyay abwaankii waynaa ee Cabdulahi Qarshe.